Hlaziya: Khiqiza Okuqukethwe Okungcono Kaningi | Martech Zone
NgeSonto, uJanuwari 6, 2013 ULwesine, April 25, 2013 Douglas Karr
Lapho ngangisebenzela Ukuhlanganiswa, umehluko kuphela phakathi kokuphumelela ukubhuloga ezinkampani izinhlelo kanye nalabo ababenenkinga kwakuwumthamo wokuqukethwe okufanele, okumangazayo abakwazi ukukhiqiza. Ngemuva kweminyaka futhi lokhu kuseyinkinga cishe kuwo wonke amaklayenti noma ithemba esinalo uma kuziwa ekwakheni isu labo lokukhangisa okuqukethwe.
Kunezizathu ezimbalwa… ukungabi nezinsizakusebenza, ukufuna ukuphelela kokuqukethwe, futhi okugcina kungazi ukuthi ubhale ini ngakho. Kuyamangaza ukuthi inkampani ingakhiqiza amakhulu ama-imeyili aphumayo kumathemba namakhasimende abasiza baphumelele, kepha bahlala kusihleli semibhalo sebhulogi esivulekile futhi bayabanda.
Hlela kabusha iyinkundla esiza iqembu lakho lokubloga ukuthi likhiqize imibono nokuqukethwe kwecebo lakho lokubloga ezinkampani:
Hlela kanye Nocwaningo - Dala isu lokuqukethwe nokuhamba komsebenzi kokuhlela ezungeze imibono yesihloko, izitayela zemboni namakhono amaqembu akho (kanye nezivakashi).
Dala futhi uhlanganyele - Ukusebenzisana okuhlakaniphile ngenqubo yokuthuthukiswa kokuqukethwe. Ngokushesha nika imisebenzi eqenjini lakho, izivakashi nosonkontileka.
Lungiselela futhi wabelane - Reference bese uxhuma brand abameli kanye influencers for seeding kangcono nokusatshalaliswa ezihlakaniphile.
Amanani entengo abiza kakhulu, aqala ku- $ 29 ngenyanga kubasebenzisi aba-5 kuze kufike ku- $ 299 ngenyanga kubasebenzisi abangama-70! Shicilela ngqo ngeWordPress, Tumblr nabanye njengokusalungiswa noma isimo esibukhoma, noma ukopishe ikhodi ye-HTML ngokuchofoza okukodwa ukusatshalaliswa okusheshayo.
Tags: ukusebenzisana kokuqukethweimiqondo yokuqukethweukubhuloga ezinkampaniphindaphinda